Taliska Ciidanka Xoogga dalka oo digniin culus u diray dadka xirta dharka Ciidanka xoogga | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Taliska Ciidanka Xoogga dalka oo digniin culus u diray dadka xirta dharka...
Taliska Ciidanka Xoogga dalka oo digniin culus u diray dadka xirta dharka Ciidanka xoogga
Muqdisho (Halqaran.com) – Taliska Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa digniin kasoo saaray adeegsiga Dharka iyo Astaamaha Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed in ay adeegsadaan dad aan ka tirsaneyn Ciidanka dowladda.
Taliyaha Ciidanka xoogga dalka, Odawaa Yuusuf Raage ayaa sheegay in ay tallaabo ka qaadi doonaan Cid walba oo aan ka tirsaneyn Ciidanka ee Xirata dharka Ciidanka dowladda.
Sidoo kale, wuxuu sheegay in Ciidanka xoogga ay la wareegi doonaan gaadiidka lagu buufiyay Astaanta Ciidanka ee ka tirsaneyn Ciidanka xoogga dalka.
Taliye Odawaa ayaa sidoo kale ka hadlay Kooxo hubeysan oo isbaaro dhigtay meelo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe oo maalmihii lasoo dhaafay dhibaato ku haayay Shacabka ku safra Wadada xiriirisa Muqdisho iyo gobolada Dhexe.
Odawaa ayaa xusay in Ciidanka xoogga ay tallaabo adag ay ka qaadi doonaan kooxahaasi, islamarkaana gacanta lagu dhigi doono.
Ugu dambeyn, taliye Odawaa ayaa xusay, in ay waddaan deddaalo ku aadan in Kooxaahasi gacanta lagu soo dhigo si sharciga loo marsiiyo.